होस्टलको बाथरुममा श्याम्पूको बोतलमा क्यामेरा लुकाएर युवतीको अश्लील भिडियो !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
होस्टलको बाथरुममा श्याम्पूको बोतलमा क्यामेरा लुकाएर युवतीको अश्लील भिडियो !
एक गल्र्स होस्टल संचालकले होस्टलको बाथरुममा राखिएको श्याम्पूको बोतलभित्र क्यामेरा लुकाएर होस्टलमा बस्ने युवतीहरुको अश्लील भिडियो बनाएको घटना सार्वजनिक भएको छ । न्यूजिल्याण्ड प्रहरीले ती संचालकसँगबाट ३४ युवतीका २१९ भिडियो क्लिप बरामद गरेको छ । उनले ती भिडियो पोर्न साइटमा अपलोड गर्ने गरेको खुलेको छ । यदि यो अभियोग प्रमाणित भएमा उनलाई १४ वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ ।
न्यूजिल्याण्ड प्रहरीका अनुसार ती संचालकले कुनै पनि युवती होस्टलमा बस्न आएपछि उनको बाथरुममा शावर नजिकै श्याम्पूको बोतल राखेर आउँथे । युवती गएपछि उनले क्यामेराबाट फुटेज निकालेर हार्ड ड्राइभमा कपी गर्थे । भिडियो अनलाइन पोस्ट गरेपछि उनी युजरहरुलाई कमेन्ट गर्न पठाउँथे । मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा अदालतले भनेको छ कि ३४ युवतीको तस्वीर र भिडियो संसारभर फैलिइसकेको छ त्यसैले आरोपीको पहिचान लुकाउनु जरुरी छ । आरोपीका वकिलले पनि उनको पहिचान खुल्दा उनकी पत्नीले परिणाम भोग्नुपर्ने भएकोले उनको पहिचान लुकाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।